Ho an'ireo tsy manam-panantenana indrindra
Farany, miraisa saina hianreo rehetra, ka miaraha ory, mifankatiava tahaka ny mpirahalahy, mifamindrà fo, manetre tena. 1 Pet. 3:8
Tonga nitondra ny famonjena ho an'ny rehetra i Kristy. Teo ambony hazo fijalian'ny Kalvary no nandoavany ny vidin'ny fanavotana tsy misy fetra ho an'ny tontolo izay efa very (...). Ny iraka nataony dia ho an'ny mpanota, ny mpanota amin'ny endriny rehetra, avy amin'ny fiteny rehetra sy ny firenena rehetra (...). Tsy nandalovany fotsiny na dia izay tena nanao fahadisoana indrindra sy izay tena nanota indrindra aza. Natao manokana ho an'ireo izay tena mila ny famonjena nentiny ny asany. Arakaraka ny filan'izy ireo fanavaozana lehibe no mahalalina kokoa ny fahalianany, mahalehibe kokoa ny fangaraham-pony, sy maha-matotra kokoa ny asany. Voahetsika hatramin'ny faran'ny lalina ho an'ireo izay tena hita fa tsy manam-panantenana sy ireo izay tena mila ny fahasoavany manova mihitsy ny fony lehibe sady feno fitiavana (...)
Tokony hokolokolointsika ny fanahy izay nentin'i Kristy niasa hamonjena ireo very. Malala eo imasony toa antsika ihany izy ireny. Ary afaka mandrombaka ny fahasoavany sy mandova ny fanjakana sahala amintsika ihany koa izy ireo. Saingy indrisy fa mihanjahanja eo amin'ny fama-boan'ny hafetsen'ny fahavalo izy ireo, mihanjahanja eo amin'ny loza sy ny fahalotoana ka raha tsy eo ny fahasoavana mamonjy avy amin'i Kristy dia azo antoka ny faharavana. Mba hitantsika araka ny tena fahazavany marina ve hoe ahoana no hanafainganana ny herim-po ananatsika sy hampitomboana ny fahamatorana sy ny fanoloran-tena ananatsika, mba hahafahantsika manaiky kokoa ireo izay mila ny fanampiantsika, ny vavaka ataontsika, ny hatsaram-panahy asehontsika, sy ny fitiavantsika! Rehefa voavoatra sy voaovan'ny fahasoavan'i Kristy ny fontsika , ka hanana taratra tsaran'ny fitiavana sy ny fahatsaran'Andriamanitra, dia hipololotra ho azy ho an'ny hafa ny fitiavana sy fangorahana ary ny fahatsaram-panahy.
Manatona eo akaikin'ny fo lehiben'ilay be fiantra sy be fitiavana ary avelao hikoriana mankany amin'ny fonao , ary avy amin'ny fonao mankany amin'ny hafa izany herinaratry ny fangorahan'Andriamanitra izany. Aoka ny fahalemem-panahy sy ny famindrampo izay nasehon'i Jesosy teo amin'ny fiainany sarobidy no ho ohatra ho antsika eo amin'ny fomba fitondrantsika ireo namantsika, indrindra fa ireo rahalahintsika ao amin'i Kristy. Aoka tsy ho hita velively ny tsy firaihana, fangatsiahana, tsy fiheverana ary ny haratsiam-panahy. Aza ariana velively ny tombontsoa ahafahana milaza teny fankaherezana sy fampitsiriana fanantenana.